FIFANKATIAVAN’NY MPIRAY TANINDRAZANA :
Nony efa tonga tao Betlehema i Naomy sy i Rota dia taitra ireo mpiray tanindrazana taminy : nalahelo an’i Naomy izy ireo, nitsetra azy ary dia afaka namboraka ny alahelony sy ny fahoriana nahazo azy izy (1:19/20). Nampiseho ny fankasitrahany sy ny fitiavany vahiny koa ireto mpiara-monina satria navela hitsimpona vary taorian’ny mpijinja i Rota (2:1/3).
FITIAVANA HIATRIKA NY FIAINANA :
Na dia vahiny aza i Rota nandray andraikitra ny hiasa ka tsy hipetraka fotsiny na hotoloram-potsiny. Tsapany ny adidiny amin’ny famelomana ny tenany sy ny rafozany izay efa tsy mahavita asa firy intsony, ka tapaka ny heviny fa hirotsaka hiasa eny an-tsaha izy (3:3).
FITIAVANA NY ASA :
Niasa tamim-pitiavana izy satria nifototra tokoa teny an-tsaha. Fotoana kely monja no nitoerany tao an-trano, ary notahian’Andriamanitra ny asany (2:17).
FIFANKATIAVAN’NY MPIASA SY NY MPAMPIASA :
Orinasan’i Boaza : hafakely, nanjakan’ny fahazavan’Andriamanitra ary tsara ny fifampitondrana tao ; Boaza : mpampiasa tsara fanahy, be fitiavana ny asany, ary koa nivavaka ho an’ireo zatovo teo aminy (2:4a). Ireo zatovo : nivavaka ho an’i Boaza mba ho betsaka ny vokatry ny taniny (2:4a). Hita fa lehilahy matahotra an’Andriamanitra i Boaza, satria nankatoaviny ny didy ao amin’ny Levitikosy 19:9 amin’ny fitsinjovana ny ory sy ny vahiny (2:16).
FITIAVANA EO AMIN’NY LAHY SY NY VAVY :
Mitsiry fitiavana an’i Rota i Boaza. Fanomezana avy amin’Andriamanitra izay. Tsy kisendrasendra ihany koa ny nahatongavan’i Rota teo amin’ny taniny fa efa notantanin’Andriamanitra ny diany. Tsy maika izy fa nandinika sy nanontany ireo zatovo mombamomba an’i Rota (2:5-7-11). Rehefa izany dia natolony azy ny fifaliana sy ny sakafo tsara indrindra (2:9-14 ; 3:10), ny lehibe indrindra amin’izany dia ny tsodranom-pitahiana (2:12). Faly i Rota tamin’izay nataon’i Boaza taminy, nandeha tamim-pahendrena izy ary nitsinjo an’i Naomy tamin’ny sakafo izay nentiny ho azy (2:11). Noborahiny tamin’i Naomy ny tsiambaratelony satria i Naomy dia noraisiny ho toy ny reniny. Faly ny fon’i Naomy satria havany ilay tia an’i Rota. Notarihiny i Rota teo amin’ny fomba fihetsehana sy fahadiovana. Nampitombo ny fitiavan’i Boaza azy izany ary koa nanintona ny masony sy ny fony. Niara-nihafy i Rota, i Naomy ary i Boaza, nifankatia tokoa izy tao anatin’izany no tsy maintsy nanatontosa ny adidiny; tsapany fa tokony hanaja ny zon’ny havany izy, izay afaka hanavotra an’i Rota araka ny fomba jiosy (3:12).
FITIAVANA NY ARA-DALANA :
Zava-dehibe ny faharetana miandry ny sitrapon’Andriamanitra, nomeny azy ny hery nandehanany amin’ny ara-dalàna sy ny fahamarinana fa izany no sitrany (Jak. 1:27). Fahamendrehana sy fahadiovana no niarahan’izy roa talohan’ny fanambadiany (3:14). Fantatr’i Boaza fa solon-drenin’i Rota i Naomy, nampitondra vary in-6 famarana izy ho mariky ny fitiavany azy (3:7) : “Raha tiana ny vady, ny rafozana no tsinjovi-mandeha”.
FIFANKATIAVANA EO AMIN’NY MPIRAHALAHY :
Mpirahalahy mahay mifanaja, mifandefitra, samy manana ny fahatahorana ny ara-drariny.
– Ilay havana akaiky no manana zo voalohany amin’ny fahatanterahan’ny fividianana ny tany sy ny fitondrana loloha an’i Rota.
– I Boaza kosa efa teraka ao am-pony ny fitiavana an’i Rota, kanefa tsy afaka nandeha alohan’ilay havana izy. Nasehony ny fandeferany eo anatrehan’ny ara-drariny, koa dia aleony nampamory ny vahoaka sy ny loholona nanazavany ny zava-misy. Tamin’izany no nanoloran’Andriamanitra fahendrena azy (4:5a) ka namalian’ilay havana an’i Boaza hoe : “Vidio ho anao izany.” (4:8)
FITIAVANA EO AMIN’NY MPIARA-MONINA :
Nambaran’ilay havany akaiky manana zo fa tsy afaka nanavotra ho an’ny tenany izy. Ny mpiara-monina sy loholona no niara-nijoro ho vavolombelon’ny fahefana nomen’i Boaza namelo-maso ny anaran’ny maty (3:9-10). Niara-paly sy nivavaka ho an’i Rota ny rehetra (4:10-12). Nankasitrahany sy notsofiny rano ny fanambadian’izy roa. Nisaotra an’Andriamanitra ny mpiara-monina sy ny loholona (4:14). Tera-dahy i Rota ary vehivavy mpiara-monina no nifidy ny anarany atao hoe : Obeda, rain’i Jese niteraka an’i Davida.
Anjarantsika ny mandini-tena mba ho tanteraka amintsika koa ny fitiavana avy amin’Andriamanitra.